လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး | Open Development Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံသည် သမိုင်းကြောင်းအရ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကိုအခြေခံသည့် နိုင်ငံဖြစ်ရာ တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး ထုတ်ကုန် အများစုမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္႑မှ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မြန်မာစိုက်ပျိုးရေး သန််းခေါင်စာရင်း ၏ ဖေါ်ပြချက် အရ မြန််မာနိုင်ငံတွင် လယ်ယာ လုပ်ကိုင်သူ မိသားစု ၃.၄၆ သန်း ရှိပြီး လယ်ယာမြေ ၈.၇ သန််း ဟတ်တာ ပေါ်တွင် စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။1
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ အလုပ်သမား တစ်ဦး၏ တစ်နှစ် ၀င်ငွေမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၉၄ သာ ရရှိပြီး မလေးရှား နိုင်ငံတွင် ၆၆၈၀ ဒေါ်လာ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် ၇၀၆ ဒေါ်လာ ရရှိ ကြောင်း တွေ့ရသည်။11
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာလုပ်ငန်းစနစ်များမှာ အမျိုးမျိုးအထွေထွေ ရှိနေပြီး မုတ်သုန်ရာသီ အတော အတွင်းတွင် ရာသီဥတု စိုထိုင်းဆမြင့်မားသဖြင့် လယ်ယာအများစုမှာ စပါး ထုတ်လုပ်ကြပြီး အေးမြ ခြောက်သွေ့သော ရာသီများတွင် စပါး မဟုတ်သော အခြားသီးနှံများ- အဓိက အားဖြင့် ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဆီထွက် သီးနှံနှင့် ပြောင်းစသည့် သီးနှံများ ကို အများစု စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ကြပါသည်။2
ဆန်စပါး သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးအကြီးဆုံး စိုက်ပျိုးရေး ကုန်စည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဆန်စပါး တန်ပေါင်း ၂၇ သန်း ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။1 မြန်မာနိုင်ငံရှိ အငယ်စား၊ အကြီးစား လယ်ယာများ အားလုံးအတွက် အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ မိုးစပါးဖြစ်ပါသည်။3
မုတ်သုန်ရာသီကာလတွင် စိုထိုင်းဆ မြင့်မားသဖြင့် အခြားသီးနှံများ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရန် အခက်အခဲ ရှိသောကြောင့် လယ်ယာအများစုတွင် အဆိုပါ ကာလအတွင်း စပါးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ကြသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။4 မြန်မာနိုင်ငံမှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ဆန်များအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့လျှက်ရှိသော်လည်း အများစု မှာ တရုတ်အစိုး၏ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် မရှိပဲ တင်ပို့နေခြင်းဖြစ်သည်။ 5
တရုတ်နယ်စပ် အာဏာပိုင်များမှ ဆန်၊ ပြောင်းဖူး၊ သကြားနှင့် ပဲမျိုးစုံ စသည့် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်များ တင်သွင်းမူ့အား ထိန််းချုပ်မူ့ တင်းကျပ် လိုက်ခြင်း က နှစ်နိုင်ငံ ကြား ဆန်စပါး ကုန်သွယ်မူ့ ကို ကြီးမားစွာ ရိုက်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ မတိုင်မီက မူဆယ် နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက် မှ ဆန်တင်ပို့မူ့မှာ တစ်နေ့လျှင် တန် ၅၀၀၀ တင်ပို့နေရာမှ အောက်တိုဘာ လ အတွင်း တန် ၁၀၀၀ အောက်သို့ လျော့ကျခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။6
အစိုးရမှ ပုံမှန််အားဖြင့် စပါး တင်ပို့မူ့အား ကန့်သတ် ထားသည်ဖြစ်ရာ ဆန်စပါးတင်ပို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် နည်းစနစ်တကျ အပြောင်းအလဲ တစ်ရပ် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည် ဟု မြန်မာတိုမ်း သတင်းစာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။7
အခြား အဓိက သီးနှံများတွင် ပဲအမျိုးမျိုး၊ နှမ်း၊ မြေပဲ နှင့် ကြံ တို့ ပါ၀င်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများဆုံး စိုက်ပျိုးသည့် ပဲအမျိုးမျိုး အုပ်စုဝင်သီးနှံများမှာ ပဲဝါကလေး၊ မတ်ပဲနှင့် ပဲတီစိမ်း တို့ ဖြစ်သည်။ မြန််မာနိုင်ငံသည် ကနေဒါ နိုင်ငံပြီးလျှင် ဒုတိယ အကြီးမားဆုံး ပဲအမျိုးမျိုး တင်ပို့သည့် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အဓိက ဝယ်ယူသည့် နိုင်ငံများမှာ အန္ဒိယ၊ UAE၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားဒေရ့ှ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တို့ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပဲအမျိုးမျိုး နိုင်ငံခြား သို့ တင်ပို့မူ့တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၃၅ သန်းခန့် ရှိပြီး ခန့်မှန်းခြေတန်ဖိုး ဒေါ်လာ (၆၃၀) သန်းရှိသည့် ဆန်စပါး တင်ပို့သည့် တန်ဖိုးထက် ပိုမိုများပြားပါသည်။8
စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ့တွင် စိုက်ပျိုးရေး၏ အခန်းကဏ္႑
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသည် ၂၀၀၅/၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန် (GDP) ၏ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နိုင်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၀/၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် ၃၇.၈ ရာခိုင်နှုန်း သို့ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့အတူ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင် နိုင်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျော့ကျခဲ့သည်။9ကွဲပြားချက် အနေဖြင့် စက်မူ့လုပ်ငန်း ကဏ္႑ သည် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့၊ ရေနံ၊ သတ္တု နှင့် ကျောက်မျက် တို့မှ ဂျီဒီပီ ဝေစု တွင် နှစ်ဆ တက်ကာ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေး လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူ့ ပွင့်လင်းလာမူသည် စက်မူ့ ကဏ္႑ လျှင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်် လုှံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။10
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီ ၁၉၃၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၀ ခုနှစ်အတွင်း ကာလများတွင် မြန်မာ ဆန်တင်ပို့မူ့မှာ တန်ပေါင်း ၃.၁၇၇ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၆၁/၆၂ ခုနှစ်တွင် တန်ပေါင်း ၁.၆၇၆ သန်းသာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ ဆန်တင်ပို့မူ့မှာ ဆက်လက် ကျဆင်းခဲ့ပြီး ၁၉၆၂/၆၃ ခုနှစ် တွင် တန်ပေါင်း ၁.၅၂ သန်း ရှိရာမှ ၁၉၈၇/၈၈ ခုနှစ်တွင် ၀.၃ တန်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုမှ တဖန် ၁၉၈၈/၈၉ ခုနှစ်တွင် တန် ၅၀၀၀၀ သာ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ 11
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌနမှ ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းဇယားများအရ ယမန်နှစ် (၂၀၁၅ ခုနှစ်) ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဆန်တင်ပို့မူ့မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၈ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ် အလားတူ ကာလအတွင်း တွင် ဆန်တင်ပို့မူ့ သည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၂၂ သန်း သာရှိခဲ့သည်။12
စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ နည်းပါးသောအကြောင်းအရင်း အချက်အလက် အမျိုးမျိုးရှိပြီး အများစုမှာ အရည်အသွေးရှိသော စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္႑ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ပစ္စည်း အင်္ဂါရပ်များ ဖြည်ဆည်းမူ လုံလောက်မူ မရှိခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်မူ ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္႑ပြင်ပရှိ လုပ်အားခများ တိုးမြှင့်လာခြင်းသည် လည်း လယ်ယာလုပ်သား လျော့နည်းမူအပေါ် သက်ရောက်မူ ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းမတည်ငွေ ကုန်ကျစရိတ် အပြောင်းအလဲများ (အတိုးနှုန်း) သည်လည်း စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္႑ဆောင်ရွက်မူ များထက်စာလျှင် အကြီးစား စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမူများကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။ မြေယာဈေနှုန်း အတက်အကျ များမှာ လည်း စက်မူ(သို့) မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမူ၏ လိုအပ်ချက် အပြောင်းအလဲများ အပေါ် မူတည်လျက် ရှိသည်။13
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှပ်နှံမူများ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ နှင့် သတ္တု တူးဖော်ရေး ကဲ့သို့ သော သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ်ယူမူ များ သို့ ရောက်ရှိသွားပြီး (၁) ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္႑ တွင် ရင်းနှီး မြှပ်နှံကြ ကြောင်း သိရသည်။14
မကြာသေးမီ နှစ်များအတွင်း တွင် တရုတ်၊ ထိုင်း၊ တောင်ကိုရီးယား နှင့် ဂျပန် နိုင်ငံများသည် မြန်မာ နိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္႑တွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံလာကြရာ ကြံနှင့် သစ်သီး စိုက်ခင်းများတွင် တရုတ် နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံ ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ က ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်ပင်စားပင် များတွင် ရင်းနှီး မြှပ်နှံခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။15
စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္႑အတွက် ထိရောက်သော အစီအစဉ်မူဝါဒများ ရေးဆွဲရာတွင် အားထားနိုင်သော အထောက်အထား အချက်အလက်များ မရှိ သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္႑သည် နွမ်းပါးမူ လျော့ချရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ လုံခြုံရေး တို့အတွက် များစွာ အရေးပါသည်။
1. COUNTRY PROGRAMMING FRAMEWORK 2012 – 2016: https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/country-programming-framework-2012-2016
2. MYANMAR: ANALYSIS OF FARM PRODUCTION ECONOMICS http://documents.worldbank.org/curated/en/509581468181132091/pdf/100066-ESW-P144951-Box394886B-PUBLIC-MM-Farm-Production-Economics-online-version.pdf
3. MYANMAR: ANALYSIS OF FARM PRODUCTION ECONOMICS http://documents.worldbank.org/curated/en/509581468181132091/pdf/100066-ESW-P144951-Box394886B-PUBLIC-MM-Farm-Production-Economics-online-version.pdf
4. COUNTRY PROGRAMMING FRAMEWORK 2012 – 2016: https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/country-programming-framework-2012-2016
7. The Myanmar Times http://www.mmtimes.com/index.php/business/22962-rice-surplus-grows-as-prices-fall-with-trade-uncertainty-on-chinese-border.html
8. MYANMAR: ANALYSIS OF FARM PRODUCTION ECONOMICS http://documents.worldbank.org/curated/en/509581468181132091/pdf/100066-ESW-P144951-Box394886B-PUBLIC-MM-Farm-Production-Economics-online-version.pdf
9. Commercial agriculture expansion in Myanmar: Links to deforestation, conversion timber, and land conflicts https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/commercial-agriculture-expansion-in-myanmar
10. Myanmar Agriculture, Natural Resources, and Environment Initial Sector Assessment, Strategy, and Road Map April 2013: https://data.opendevelopmentmekong.net/library_record/agriculture-natural-resources-and-environment-initial-sector-assessment-strategy-and-road-map
11. AGRICULTURE IN MYANMAR: What Has Happened to Asia’s Rice Bowl? https://www.jstor.org/stable/27912003?seq=1#page_scan_tab_contents
12. Ministry of Commerce http://www.commerce.gov.mm
13. MYANMAR: ANALYSIS OF FARM PRODUCTION ECONOMICS http://documents.worldbank.org/curated/en/509581468181132091/pdf/100066-ESW-P144951-Box394886B-PUBLIC-MM-Farm-Production-Economics-online-version.pdf
15. Bagan Trade Blog: http://blog.bagantrade.com/
ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအားဖြည့်ကူညီခြင်း- နိုင်ငံတော်အဆင့်နှင့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာမူဝါဒများကို ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် ထိန်းညှိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဆန်တင်ပို့မူ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၉၃ သန်း ရရှိ
ဘရူနိုင်း ကိုယ်စားလှယ် ဆန်စပါး တင်ပို့မူ့ မျက်စိကျ